सिरानीमुनी के राख्ने ? वास्तुशास्त्र भन्छ – यी कुरा राखेर सुत्दा हुन्छ फलिफाप ! – Bannigadhi Today
सिरानीमुनी के राख्ने ? वास्तुशास्त्र भन्छ – यी कुरा राखेर सुत्दा हुन्छ फलिफाप !
धनराज साउँद २०७७ मंसीर १२, शुक्रबार २०:१६
तपाई वास्तुशास्त्रमा कत्तिको विश्वास गर्नुहुन्छ ? कहिलेकाहिँ हामीले चाहँदा चाहँदै पनि जीवन सोचजस्तो चाहेजसरी चलाउन मिल्दैन/हुँदैन । सम्पूर्ण खर्च लगाउँदा पनि काम बन्नुको साटो बिग्रँदै जान्छ । एकातिरबाट मिलाउँदै गयो अर्कोतिरबाट खस्किँदै जान्छ ।
वास्तुशास्त्रका अनुसार तपाईले सिरानीमुनी के कुरा राखेर सुत्नुहुन्छ भन्ने कुराले पनि तपाईको जीवनसँग अर्थ राख्छ । यो प्रश्न गरेका धेरैले जवाफमा भन्छन्, ‘मेरो सिरानीमा २/ ४ पैसा छ, होला।’ अनि केही महिलाले जवाफ दिन्छन् – ‘कपाल बाँध्ने रबर ।’ कतिपयले भन्छन्, ‘सजिलो लाग्ने भएकोले सिरानीमा मोबाईल राखीन्छ ।’ तर त्यसो होईन ।
वास्तुशास्त्रका अनुसार तपाईले आफ्नो सिरानीमूनि केही महत्वपूर्ण चीज राखेर सुत्दा तपाईको विपत्ति दुर हुन्छ । र, जीवनमा नया नयाँ ढोकाहरु खुल्नेछन् । यसअर्थ आजै राम्रो कामको सुरुवात किन नगर्ने
राति सुतेको समयमा सिरानी मुनि गीता हुनु राम्रो हुन्छ ।
कतिपयले हनुमान चालिसा राख्न पनि सुझाएको पाईन्छ ।
तामाको भाँडामा पानी राखेर बिहान उठ्नासाथ उक्त पानी पिउनुहोस् । बचेको पानीलाई कुनै गमलामा हाल्नाले तपाइको मनोकामना पूरा हुन्छ ।
दक्षिण दिशामा शिर अनि उत्तर दिशामा गोडा पारेर सुत्नु सर्वोत्तम मानिन्छ । यदी यसरी सुत्नुभयो भने धेरै बिमारी लाग्न पाउँदैनन् ।
हामीले दक्षिणतिर शिर पारेर सुत्दा यो ऊर्जा हाम्रो शिरबाट पसेर गोडाको बाटो हुँदै निस्कन्छ ।
पति–पत्नीबीचको सम्बन्धमा छटपट छ भने मंगलबारको राति मुङको दाललाई कुनै हरियो रंगको कपडामा बाधेर सिरानीमुनि राखेर सुत्नुहोस् र बिहान उठेर उक्त कपडा कुनै कन्यालाई दान गनुस् वा दुर्गा मन्दिरमा चढाउनुहोस् ।
क्याटेगोरी : जीवन शैली, स्वास्थ्य
अछामका १४ जनाको कोरोना रिपोर्ट नेगेटिभ
कोरोना विरुद्धको खोप वितरणमा भैरहेको असमानताबारे राष्ट्रसंघको महासभामा…